कविताको कमाल / रामकुमार पाँडे | Online Sahitya
कविताको कमाल / रामकुमार पाँडे
कहाँको बहुलट्ठी कुरो गर्छ भन्नु होला ! बहुदलमा एकलठ्ठी भए त अधिनायक भइहाल्यो नि ! बहुलठ्ठी भए पो एउटाले लठ्ठी चलायो कि अरू लठ्ठी लठ्ठक बन्दैनन् र उस्तै परे लठ्ठीको झट्टी वर्षन बेर हुन्न । यही लठ्ठी अर्थात् पौरुष्यमा पट्टी पठ्ठासँग लठ्ठी कट्टी प्रदर्शनमा पछि पर्दैनन् । नपत्याए डान्सका डनसँग सोध्नोस् । पठ्ठा पनि ठट्टै ठट्टामा चट्टीको झट्टीको भय नआउने भए पठ्ठीसँग लठ्ठी लट्टपिट्ट िपार्न बेर हुन्न ।
लठ्ठी पक्डने मास्टर पनि हुन्छन् । वेनमास्टर त अझ लठ्ठीले नै लत पर्दै पार्दै धुन तर्काउँछन्, मर्काउँछन् र चर्काउँछन् । लठ्ठी लिनुभन्दा कलम लिनु जाति ! कलमले उस्तै परे छाती चिर्छ र सात पुस्ता पिर्छ । कलमले तरबारको घरवार उडाउँछ । नपत्याए हेर्नोस् पत्रकारको पत्रिका र पत्रिकाको पत्रकार ! मान्छेलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन कलमले मल्हम लगाउन पछि पर्दैन । नपत्याए नेताको पछि बुद्धिजीवी वा बुद्धीजीवीको पछि बुद्धिजीवी हेर्नोस् ! लठ्ठीको झट्टी हैन लठ्ठीको कविता पड्काएपछि लठ्ठी हाल्छ मान्छे । नपत्याए एउटा गीत नै सुन्नोस् -
[Source: Madhuparka Monthly]